Maro ny zava-mahaliana ho an’ny ankizy ho hita amin’ity hetsika hotontosaina eny Ankadindratombo ity, hoy ny fanazavany. Antony dia satria ity noely 2019 ity dia angatahana amin’Andriamanitra mba hisian’ny fiovana eto Madagasikara. Tokony hiova ny fomba fitondrana ny fanjakana ary manova hatrany ifotony mihitsy ny zava-misy mba hiverina amin’ny fanao taloha nampiavaka ny Malagasy. Fotoana hamerenana ny fihavanana izao satria lasa mibahana loatra ny fisaratsarahana ankehitriny ary na ny mpiray tampo aza tsy mihavana. Miangavy ny mpitondra aho mba hanao ezaka hamerina ny fihavanana, hoy ny fanehoan-keviny.